5 Ezona zixeko ziBalaseleyo eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Ezona zixeko ziBalaseleyo eYurophu
Iinqaba zaseYurophu kwaye izitrato ebukekayo kwaye iindawo bezilulungiselelo lwentsomi emnandi kangangeminyaka. Ukuza kuthi ga namhlanje i-Europe yeyona quintessential yeyona mbutho iphambili emhlabeni. Yeyona mecca yamaqela kubahambi abasuka kwihlabathi liphela njenge bachelor kunye bachelorette uhambo. ke, Sikhethe ngocoselelo eyona ilungileyo 5 izixeko zeepati eYurophu zeholideyori kunye zasendle.
EBerlin ku Amsterdam, imivalo yokutshabalalisa yeyona ndawo ibalulekileyo yasebusuku eYurophu, yi zokuhamba train okanye iklabhu yokutsiba, qinisa ibhanti yendawo yakho yolohambo lwasendle ngoku.
Ukuhamba ngololiwe yeyona ndlela ifanelekileyo yokuhamba eYurophu. Eli nqaku ibhalwe ukuba afunde Train Travel yi Gcina A Isitimela, the Amatikiti amaThengi angabizi kakhulu kwiWebhusayithi.
1. Iqela kwiBerlin, Jemani
Esona sixeko sinobuhlobo eYurophu, IBerlin yindawo yeMecca yegcisa, abaculi, kunye neeDVD ezibalaseleyo zehlabathi. Imbali nenkcubeko yayo ibe nefuthe kwiyantlukwano yayo nendlela evulekileyo yokuthetha, Oko kuthetha ukuba nantoni na ehamba. ngoko ke, IBerlin yeyona dolophana yasendle neyona ndawo intle kwezona dolophana.
Iklabhu yaseBerlin kunye neqela lepati ziqala ukuqala emva kobumnyama. Ukuba ufuna ukufumana amava wobusuku baseBerlin njengeBerliner, ukupakisha izihlangu ezifanelekileyo, ukunxiba nje kwaye ufike ngoLwesihlanu. Thatha isiselo kwenye yemivalo emininzi eBerlin kunye nentloko ukuya kwindawo yezemizi-mveliso.
Iiklabhu ezilungileyo kakhulu eBerlin zifihlwe kude kwindawo yezemveliso yaseBerlin nangaphantsi koololiwe. Zilungiselele ipati engayeki, okanye ume kuphela xa umntu wokugqibela emi. Ubusuku be-Berliners 1 ndikwiMigqibelo kude kube ngeCawa ebusuku. Ngokuqinisekileyo le nto ibeka iBerlin kwezona zixeko zibalulekileyo kunye neyona dolophu ibalaseleyo eYurophu kunye nabakhenkethi kunye neeklabhu ezazihamba kwilizwe liphela.
Yeyiphi iKlabhu yasebusuku ebalaseleyo eBerlin?
Ukuba unyukele kuma-48h wokuthatha inxaxheba kwaye unexesha leklabhu enye, ke qiniseka ukuba ubepati kwiBerggin. Ezona zixhobo zibalaseleyo zeetekhnoloji kunye nezandi zendlu ziya kunyikima umhlaba wokudanisa yonke impelaveki.
IFrankfurt yaya eBerlin ngoLoliwe
Copenhagen ukuya eBerlin ngoLoliwe
Ukuhamba ngeenyawo ukuya eBerlin ngoLoliwe
IHamburg ukuya eBerlin ngoLoliwe
2. Iqela kwiBudapest, Hangari
Emini kunye neeyure zokutshona kwelanga, IBudapest yeyona nto inomgangatho oqinisekileyo ngezinto zayo ezintle ezithandekayo zokwakha kunye neesayithi. Njengoko uzulazula ezitratweni, Amehlo akho akanakulandela eyona ndawo intle eYurophu. kodwa, ebusuku uyakufumana elinye ilizwe, Ilizwe elinezakhiwo ezingaphiliyo liguqukela kwimimandla engaqhelekanga yaseYurophu, kwaye le meko ikhethekileyo ibeka iBudapest kuthi 5 ezona zixeko ziqela.
Emva kobumnyama, kwenye indawo, apho kungekho ndlela okanye mithetho yendlu, izinto ziya kude.
Yeyiphi iklabhu yasebusuku ehamba phambili kuyo Budapest?
I-Szimpla Kert yiBarapest's icon icon eyonakalisayo kwisithili 7 kunye necandelo leLabyrinthine ephezulu kwigumbi eliphezulu kunye nokundwendwela amava amangalisayo obusuku bepati yeBudapest.
IVienna ukuya eBudapest ngoLoliwe
Thobela eBudapest ngoLoliwe
UMunich ukuya eBudapest ngoLoliwe
I-Graz eya eBudapest ngoLoliwe
3. Ipati ePrague, Umphakathi waseCzech
IPrague sesinye sezona zixeko zihle kakhulu eYurophu. Emini uya kuziva ngathi ubuyile ngexesha ukuya ezinqabeni, iinkosana, kunye nebali le-knights, kodwa phakathi kobusuku ixesha uya kwihambo yobusuku obunobuqili, apho kuthintelwa ishiyeko ngasemva komnyango.
Isixeko sigcwele iigadi zeebhiya ngasemlanjeni, pubs, kunye nemivalo eneembono ezimangalisayo zesixeko kunye nembali yeqela elaziwayo.
Yeyiphi iklabhu yasebusuku ehamba phambili kuyo Prague?
IPrague likhaya leyona klabhu inkulu eYurophu, Ibali lesi-5 I-Karlovy Lazne Club. ke, ukuba ucwangcisa uhambo oluya ePrague nabahlobo bakho okanye i-Eurotrip yokuhlola izixeko zeqela eliphambili zaseYurophu, ke le nto kufuneka uyeke kwi-adventure yakho. Yazi ukuba xa uthe wangena kwiminyango yeqela, Ungaphuma umntu owahlukileyo ngokupheleleyo Nokuba kwenzeka ntoni ePrague, uhlala ePrague.
4. Iqela kwiAmsterdam, Inetherlands
Idume ngemijelo yayo emihle kwaye iivenkile zekofu, IAmsterdam yiYurophu eyaziwayo indawo ekuyiwa kuyo. Ine-vibe ecekeceke kakhulu, Ngaphandle kwesibane sayo esidumileyo esibomvu kunye neivenkile zekofu.
Ngelixa amaDatshi ekhetha iindibano eziphambili, ukuba ubuza abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela, bangathi iAmsterdam inelinye icala. In comparison to the other cities in our best party cities in Europe, e Amsterdam, Uyakufumana izandi zokuzithambekisa kwiiklabhu ezininzi, kodwa kwakhona umculo live. Imibukiso ebukhoma idume kakhulu eAmsterdam.
Yeyiphi iklabhu yasebusuku ehamba phambili kuyo Amsterdam?
Iqela leqela lomculo eliphambili kuphela nguMelkweg kunye neBimhuis, kwaye iiklabhu zasebusuku ezilungileyo kakhulu yiDe Marktkantine kunye neShelter.
5. Ipati eVienna, Ostriya
Isixeko esaziyo sonke nge-opera yayo engazange ibonwe kunye nobomi benkcubeko sikwanobomi obumnandi nobumnandi. Ngokuchasene nezinye izigcawu zobusuku basebusuku kumazwe aselumelwaneni, indawo yasebusuku eVienna inobuhlobo kwaye ihlaziyeke ngakumbi. Umzekelo, umrhumo wokungena eVienna uphantsi kunye nemigaqo-nkqubo yokubuyela emnyango.
e Vienna, Uninzi unokufumana iiklabhu zeteknoloji, kodwa nangaphantsi komhlaba kunye nezitayile ze-acid kwezinye iiklabhu.
Yeyiphi iklabhu yasebusuku ehamba phambili kuyo Vienna?
Ngawona maqela aphambili eteknoloji yiya kwiDas Werk kunye neGrlle Forelle. Ukuba ufuna iklabhu yokukhamba yiya kwi-Gourel, indlela etyhutyha umbindi wesixeko. Kulapho uya kufumana khona ii-pubs ezininzi kunye neeklabhu zidityaniswe kunye. Qiniseka ukuba ujonga uVenster99.
U-Elektro Gonner ngumzekelo obalaseleyo wobomi bobusuku baseVienna. Kubekwe kwivenkile yombane, ikwindawo yokufakwa kwevidiyo kunye nomculo we-electro. Ibha yeLoft ibekwe phezulu kweSofitel Vienna Stephansdom enemitha ye-epic ilanga kunye nemibono yesixeko.
Isaladi ukuya eVienna ngoLoliwe
UMunich ukuya eVienna ngoLoliwe
Igreyini ukuya eVienna ngoLoliwe
Prague ukuya eVienna ngoLoliwe
Ulwazi oluthe kratya malunga naMaqela eYurophu
Leliphi iXesha elona liLungileyo lokuFumana i-Nightlife eYurophu?
Ukuwa kwentwasahlobo kunye nokuwa kwangoko lelona xesha lilungileyo lokuhamba kunye nokufumana ezona zixeko ziipati.
Yintoni uluhlu lwamaxabiso entengo yokungena kwiiKlabhu zasebusuku zaseYurophu?
Umrhumo wokungena uhluka kwilizwe ngalinye. Uninzi lweedolophu zaseYurophu zixabiso eliphantsi kakhulu, umzekelo, I-Prague kunye neBudapest, 5-20 Ukungena kwee-euro kunye notywala ngamaxabiso afanelekileyo, ezinye iindawo zibiza kakhulu, kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu, uza kusasa, ke awuzukuma ixesha elide kulayini.
Sisiphi isiXeko esona sinobusuku obumnandi kakhulu eYurophu ukulungiselela uNyaka oMtsha kunye neKrisimesi?
Esona sixeko sihle seKrisimesi kunye noNyaka oMtsha woNyaka ngokuqinisekileyo yiBerlin ukuba uhamba encane. IAmsterdam nePrague zintle ebusika, kodwa kancinci pricier.
Ukushwankathela, I-Europe inento yokubonelela ngayo nayiphi na incasa, umnqweno, inqanaba lobungendawo, kunye nohlahlo. Phezulu kwethu 5 izixeko zepati zibonelela ngeyona nto ibalaseleyo kuwo wonke umhlaba. Ngokuqinisekileyo ungaqala ngobumnene ngokubhabha okanye ngeeklabhu zomculo bukhoma kwaye uqhubeke nakwezona ndawo zomdaniso zasendle eYurophu, bonke ngobusuku obubodwa. Ngaphezulu kwayo yonke, zonke izixeko ziyafikeleleka ngokulula nge train zokuhamba, ke ukuba liphupha lakho elimnandi kakhulu lokuba nepati emnandi ngempelaveki kwaye undwendwele konke 5, emva koko iYurophu ilindele.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ufumane amatikiti asezantsi eexabiso eliphantsi ukuya nakweyiphi na yezixeko zeqela elihle kuluhlu lwethu.
Ngaba uyafuna ukusibetisa iposti yebhlog yethu "I-5 Cities Party Cities in Europe" kwisayithi lakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-party-cities-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uzakufumana iindlela zethu ezithandwa kakhulu kuloliwe - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / fr ukuba / de okanye / es kwiilwimi ezininzi.
AmsterdamParty berlinparty budapestparty europenightlife europepartycity yasebusuku Party PragueParty UkuhambaVienna viennaparty
Cities Best EYurophu bethenga ngololiwe
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe
Ukwenza ukuqhuba ukuHamba ngokuShishini ngokuchanekileyo
Business ahambe ngetreyini, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe